mars 2018 – filazantsaramada
« Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin’ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra, fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. » Hebreo 4:1 Enina andro Jehovah Andriamanitra no niasa nanao izao tontolo izao. Rehefa vita izany dia nitsahatra Izy. Mbola ao amin’izany andro fitsaharan’Andriamanitra izany ihany iska izao satria […]
Publié parfilazantsaramada mars 30, 2018 mars 28, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FITSAHARAN’ANDRIAMANITRA
IZAHAO TOETRA NY FANAHY (2)
« Anaka, ianareo dia avy amin’Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe Izay ao aminareo noho izay ao amin’izao tontolo izao. » 1Jaona 4:4 Fanahy roa no misy eto amin’izao tontolo izao, dia ny Fanahin’Andriamanitra sy ny fanahy tsy avy amin’Andriamanitra, izay tsy manaiky an’i Jesosy. – Ny Fanahy Masina ihany no Fanahin’Andriamanitra. Teo io Fanahy io […]
Publié parfilazantsaramada mars 26, 2018 avril 27, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IZAHAO TOETRA NY FANAHY (2)
« Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin’Andriamanitra ireny, na tsia, » I Jaona 4:1a Maro tokoa ny fanahy miparitaka eto amin’izao tontolo izao. Fa misy ny avy amin’Andriamanitra, ary misy ny tsy avy amin’Andriamanitra. Ho antsika izay ambara hoe malalan’Andriamanitra izao teny izao. Fa maninona no malala? Malala […]
Publié parfilazantsaramada mars 16, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IZAHAO TOETRA NY FANAHY
TSY FOANA NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA
« Tsy mahafoana ny fahasoavan’Andriamanitra aho; fa raha avy amin’ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy. » Galatiana 2:21 Ny lalàna nomen’i Jehovah ny Isiraely no nentiny hisian’ny fifampifehezana teo amin’ny olony. Fa manameloka izay mandika izany lalàna izany ny lalàna. Ny fandikana ny lalàna no fahotana. Ary fahafatesana no tambin’ny ota. Meloka izay nanota. Koa […]
Publié parfilazantsaramada mars 14, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY FOANA NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA
TEZAO AO AMIN’NY TOMPO NY ZANAKAO
« Ary hianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin’ny famaizana sy ny fananaran’ny Tompo izy. » Efesiana 6:4 Miara miaiky ny maro fa sarotra ny fitaizana ankehitriny izao, fa mbola folo na roambin’ny folo taona ny tanora dia voafatotra amin’ny fatorana ratsy isankarazany, indrindra ny zava-maha domelina. Inona no nataon’i Jesosy? Hoy Izy: avelao ny […]
Publié parfilazantsaramada mars 2, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TEZAO AO AMIN’NY TOMPO NY ZANAKAO